Nezvedu - Zhangjiagang Riching Machinery Co., Ltd.
Zhangjiagang Riching Mahcinery iri mukugadzira nekutengesa michina, inonyanya kuve nyanzvi mune epurasitiki michina. Vashambadziri vedu vanga vachishanda mumunda wepurasitiki indasitiri makore mazhinji.Tinozvipira kutengesa varimi vedu 'epurasitiki eqiupment, uye zvimwe zvikamu uye mbishi zvinhu.
Bhizinesi redu rinosanganisira yekuwachisa epurasitiki nemidziyo yekushandisa zvekare, extruder, shredder muchina, kusvina muchina, zvikamu zvekusiya zvemuchina wepurasitiki nezvimwe.
- Kubatsira kwedu -
Isu tinounganidza mainjiniya ane hunyanzvi mumunda wepurasitiki, Isu takagadzira mushambadzi uye munhu webasa mushure mekutengesa, Ndiani anoitisa tekinoroji zvakanaka, nehunyanzvi hwekutaurirana uye kugona kutaura kwakasimba muChirungu chakanyorwa & chakataurwa.
Mutengo & mutengo
Isu (vese varairimari) tinopa kusangana kwecheni yezvikamu zvekumusoro kwepamusoro, zvakare tinogovana papuratifomu uye zviwanikwa zvevanhu uye mainjiniya, ayo anoderedza mutengo wekugadzira, mutengo wekutonga uye mutengo wekutengesa zvakanyanya.
Chinangwa chedu ndechekuvaka imwechete-yekumira kutsvaga chikuva, chikuva chebasa uye tekinoroji inotsigira chikuva chevatengi mumunda wepurasitiki indasitiri muchina munda. Batsira madiki kudzikisa mutengo wekutenga, kudzora mhando Batsira mateketi kunongedza kutenga kubva kufekitori muChina.Vaka bhiriji rimwe pakati pevatengi nevatengesi vedu (yepakati-diki fekitori fekitori)
Tine nzira yekudzivirira evalution pane yemhando nhanho.Kune yega michina yakadzvanywa usati wasununguka, Tine zvakare mainjiniya edu kuti aone.
Isu tinowana isu kwete kwete chete semugadziri uye mutengesi, teererai asiwo sevhisi-kubatsira vatengi kuti vawane qulaity michina nemutengo wakachipa, regai vatengi vasina kana kunetseka mushure mekutenga.
1.Kurumbidza mamiriro einjiniya anodikanwa kuti aiswe
yemuchina & zvishandiso
2.Communicating munguva yekugadzira kufambira mberi kweiyo
3.Kupa rubatsiro mune zvehunyanzvi mamiriro, sikuruu musanganiswa
uye dhiramu dhizaini inodiwa yechigadzirwa
1.Providing panzvimbo nzvimbo michina rubatsiro kugadzwa, pakutuma uye kurovedza
2.Filing zvakadzama mutengi ruzivo
3.Kupa nguva yakareba yekuchengetedza sevhisi uye zvikamu zvekusiya
4.Kupa technical technical kune mutengi mukugadzira chigadzirwa chitsva
5.Kupa rusununguko rwekuchengetedza kwegore